Gaia GPS, si ay u qabsadaan GPS, Ipad iyo marinada mobile - Geofumed
Abriil, 2011 Apple - Mac, GPS / Qalabka
Waxaan soo bixi app ah Ipad in uu iga tagay in ka badan ayaa ku qanacsanaa baahida loo qabo in lahaa in la sameeyo la statistics GPS a ka dibna u soo bandhigo online ama Google Earth.
Tani waa Gaia GPS, codsi ah oo kaliya kharashka 12 laakiin taasi waa mid aad u firfircoon ee taleefannada gacanta oo leh nidaamyada Apple iyo Android. awoodaha Its laga gudbo qabsaday wadada a, lagu dhamaystiro si everytrail.com muujiyaan karaa photos, wadooyinka Khariidadaha Google iyo xataa dhoofin in GPX loo isticmaalo la browser a caadiga ah iyo KML si ay u muujiyaan in 3D on Google Earth.
Aynu dib u eegno wixii faahfaahin ah ee loo qaban karo qalabkaas.
1 Isku-taga Ipad
Codsigu waa kaliya inuu soo dejiyo, mar haddii la rakibay waxay u ogolaaneysaa dhowr marxaladood oo ku filan oo ku filan wixii aan ku helay filashadayda:
Waxaad samayn kartaa jidad, oo muujinaya goorta la bilaabayo, goorta la joojin karo qabashada iyo goorta la sii wadi doono.
Waqtiga asalka waxaad ka arki kartaa Khariidadaha Furan ama khariidooyinka loo yaqaan 'topographic maps' oo leh caalam ahaan.
Waxaad soo bandhigi kartaa in ka badan 10 malaayiin dhibcood oo la yaqaan, sida buuraha, isgoysyada, bulshooyinka iyo meelaha kale ee daneynaya.
GPS ma ku xiran yahay haddii uu jiro xiriirka internetka, weli waa la qabtaa inkastoo muuqaalka sawirada oo kaliya muujinaya waxa ku jira kaydka.
Si looga hortago kor ku xusan, waxaad u keydsan kartaa aag ahaan muusikada sawirada si aad u muujiso la daboolay wali wali xiran.
Waxay ka dhigeysaa tirada garaafka iyo tirakoobka ee xarig kasta oo lagu qaado jidka, kaas oo lagu arki karo waqtiga dhabta ah; oo leh macluumaadka sida isuduwid juquraafi ama UTM, xawaaraha hadda, xawaaraha celceliska safarka, heerka sare ee ka sarreeya heerka badda, safarka masaafo, iwm.
Ipad, waayo-aragnimadu way ka fiicantahay telefanka, sababtoo ah baaxadda bandhigga iyo sahlanaanta isticmaalka faraha si loo dhexgalo. Kadib, waddada ayaa loo kaydin karaa loona soo celin karaa falanqaynta wakhti kasta.
Sida ugu fiican, waxay ku ordi kartaa asalka, si aad uga shaqeyn kartid hawlaha kale ee Ipad ama gobolka hibernated. Wakhti kasta waa la hawlgalaa, safarkuna wuu istaagaa ama wuxuu bilaabaa mid cusub isagoo aan isticmaalin xasuusin badan ama batari.
2 Ku muuji Khariidadaha Google.
Taas awgeed, waa inaad iska diiwaangelisaa barta internetka ee kasta galitaanka kula isticmaala Facebook. Kadibna, Ipad waa jadwal la taaban karo waxaana la doortaa xulashada; waxaa loo kaydiyaa sida fayl cusub safarkayga; isku mid noqon kara mid dadweyne ama mid gaar ah.
Halkan waxaa ku soo baxaya wanaagga, waxaa lagu soo bandhigi karaa adigoo isticmaalaya khariidadaha Khariidadaha Google ee asalka ah, ha ahaato dayax gacmeed, xayeysiis, khariidad ama jiil.
Khadadka cas waa habka la qabsaday. Sawirka, sawirka waxaa lagu muujiyay buluug khafiif ah iyo rinjiga riwaayadda xawaaraha safarka kilomitir saacaddii. Sidoo kale, soo koobidda, ee waddadaas oo aan ka sameeyay minimka 13 ee daqiiqado 14 iyo ku dhowaad ku dhowaad mitirada 400.
Sawirkaas, xitaa waxaa lagu fulin karaa fiidiyoow sida hoos ku tusay, inkastoo ay u muuqato mid weyn internetka.
Gaaritaanka GPS ee Ipad?
Maaha wax xun, waa sida browser kasta. Soco inta u dhaxaysa 3 iyo 6; aad si cad u arki karaa in sawirka muujinaysaa; inkasta oo ay muhiim u tahay in la isku dayo in la qabsado foomka rasmiga ah sababta oo ah waxaa jira gaadhi xawaare ah oo ku saabsan xNUMX kilomitir saacaddii iyo mararka qaarkood waxa ay caddaynayaan farqiga marka la badalayo wakhtiyada qabashada fogaanta ama ilbiriqsiyada. Chulo wadada, eeg farqiga weyn ee raadinta Google ee ku yaala badi magaalooyinka aan Latinka ahayn.
Dabcan, ma kiisaska oo dhan ku dhacaa si fiican u leh sawir ee Google Earth, sababtoo ah qalabka lumiya sax, laakiin maxaa yeelay image ee Google ayaa barakac dhexeeya mitir 10 iyo 20 dhulka miyiga fog magaalooyinka waaweyn ama topographies arrin aan caadi ahayn halkaas oo ay fududahay qaabka dhulka lagu isticmaalo ay saameyn ku yeelatay dhaqaalaheeda.
Isku habee oo u dhoofi qaabab kale
Online wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto waddoyin cusub, oo ay ku jiraan gujinta khariidada iyo qaabaynta adigoo jiidaya dhawaaqyada; Qalab kale oo aad u wanaagsan ayaa ah in aad abuuri karto mid cusub oo ka kooban dhowr dariiqo. Maaha wax xun in loo diro GPX, si ay ugu dhejiso qalabka kale sida Garmin, Magellan, SPOT Satellite Messenger, Blackberry, iwm. Bogga waxaa kale oo uu taageersan yahay in la geliyo faylasha GPX oo lagu qabtay waxqabad GPS ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa loo dhoofin karaa kml, halkaas oo lagu arki karo 3D.
Aan xun, waxaa jira codsiyada kale oo gaar ah, laakiin waxay ila eg tahay ugu fiican, in la dhamaystiro functionalities website-ka in furfuraya baahida loo qabo in geliyaan, abuuro, edit ama muujiyaan waypoint GPX nooca file online ama tareenka.
U tag Alltrial.com
Post Previous«Previous Bentley Map V8i Isbedelada 2011
Post Next Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo wax ka duwanNext »
7 Jawaab "Gaia GPS, si ay u qabato GPS, Ipad iyo waddooyinka wareega"
Juan Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Dalxiisyada, socdaalka, wadooyinka baaskiilka, iwm. Waxaan kugula talinayaa barnaamijka GOLAHA GUUD EE GUNKA, waxa uu leeyahay miisaan, mitir ah, wuxuu qorayaa waddooyinka la sameeyay oo waxay bixisaa macluumaad badan
Had iyo jeer waxaan ku qaadaa moobaylkeyga.
Waa hagaag mana aanan ogeyn, laakiin eeg bogga ayaa u muuqda mid rajo leh.
Halkaas ayaad iigu sheegi sida aad u sameyneyso.
vic isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid! waxaad igu badbaadisay 10 € hehe. Hadda waxaan baadhi doonaa app ah oo la yiraahdo MotionX GPS. Miyuu dhawaaqayaa? Maxaad u maleyneysaa? Tani haddii ay u muuqato in aad ka soo dejisan kartid khariidadaha loogu talagalay offline. Marka lagu daro dhoofinta iyo soo dejinta jidadka GPS.
Maya, codsigan ma ahan kan adiga ku daneynaya. Waxaa jira barnaamij loo yaqaan Offmaps 2
Nooca maktabadda ee 99 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso khariidadaha laba magaalo, laakiin nooca lacagta ah, oo u ordaya US $ 6 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso dhammaan khariidadaha aad rabto. Aad ayaan u fiicanahay, waqtiga kale wuxuu badbaadiyay noloshayda markii aan ka maqnaa waddankayga. Waa isla saldhigga Khariidadaha Wadada Furan laakiin faa iidada ugu jirta inaad deg deg ugu soo dejiso.
Waxaan xiiseynayaa app this iPad ah. Waxaan eegay boggaaga waxayna u muuqataa in lacagta la bixiyay ay la socoto dhammaan khariidadaha adduunka. Tani ma sidaas? Laakiin waxa runtii i xiiseynaya ayaa awood u leh inay soo dejiyaan khariidadaha si ay u adeegsadaan shaqaale aan rasmi ahayn, laakiin ma aanan arkin sida loo sameeyo, iyo haddii ay tahay inaad si gaar ah u bixiso. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga.
The. Lite version ma kuu oggolaanayso in aad cabirtid jidad aad u dheer.
Saxnimada GPS-ka taleefanka gacantu wuxuu udhowyahay sida duuliyaha Garmin. Inta u dhaxaysa 3 iyo 6 mitir radius agagaarka barta aad qaadaneyso.
In kasta oo aan sameeyay baaritaanno oo aan arkay in kooxahan ay ku mashquulsan yihiin dhaqdhaqaaq, si ay u awoodaan in ay helaan meel saxan. Kaliya bilow oo qaado qodobbada, haddii ay aad ugu dhow yihiin waxay soo saartaa macluumaad qalloocan.
Walaalkaygu wuxuu leeyahay LG GT540 cel celis ah oo leh GPS.
Su'aalaheygu waa, sida saxda ah u tahay heerka cabbirka? Si aad u iibsato isla cirifka. hehehe! Cirifka GPS ee iigu yeerayo wax badan oo fiiro badan.
Maxay yihiin farqiyada u dhaxeeya Gais GPS iyo Gaia GPS Lite?